Wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato barafka | Saadaasha Shabakadda
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato barafka
Baraf waa waxa loogu yeero biyaha barafoobay ee soo da'ay. Ma aha wax ka badan biyaha ku jira xaalad adag oo si toos ah uga soo dhaca daruuraha. Snowflakes waxay ka kooban yihiin kristantar baraf ah oo, markay u dhaadhacaan dhulka dushiisa, wax walba ku daboola buste cad oo qurux badan.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida barafku u samaysan yahay, sababta barafku u dhacayo, noocyada barafka jira iyo meertadooda, sii wad akhriska 🙂
2 Sidee loo sameeyaa?
3 Qaababka Snowflake
4 Noocyada barafka
4.2 Qabow baraf ah
4.3 Barafka budada ah
4.4 Baraf miidhan
4.5 Baraf lumay
4.6 Baraf qolof leh
4.7 Taarikada dabaysha
4.10 Nusqaamaha kala-baxa
4.12 Kanaallada bullaacadaha
Sidii barafku u da’ayey isaga ayuu u yaqaanaa nevada. Dhacdadani waa mid ku soo noqnoqota gobollo badan oo astaamahooda ugu waaweyn ay ku jiraan heer kul hoose (badanaa xilliga qaboobaha). Marka barafku da'o, waxay u muuqdaan inay waxyeelleeyaan kaabayaasha magaalooyinka waxayna carqaladeeyaan howlaha maalinlaha ah iyo kuwa warshadaha marar badan.
Qaab dhismeedka jajabyada waa jab. Fractals waa qaabab joomatari ah oo lagu celceliyo miisaanno kala duwan, oo dhalinaya saameyn muuqaal oo aad u xiiso badan.
Magaalooyin badan waxay leeyihiin baraf soo jiidashada dalxiis ee ugu weyn (tusaale ahaan, Sierra Nevada). Mahadsanid barafka culus ee ka jira meelahan, waxaad ku tababaran kartaa isboorti kala duwan sida barafka ama barafka. Intaas waxaa sii dheer, barafku wuxuu bixiyaa muuqaallo riyooyin u eg, oo soo jiidan kara dalxiisayaal badan oo soo saari kara faa'iidooyin badan.
Waxaan ka soo hadalnay sida barafku u yahay soojiidasho dalxiis oo xoog leh iyo inuu ka tago muuqaal qurxoon marka uu soo jeedo. Laakiin sidee bay jajabkani u sameysmaan?
Barafku waa kiristaalo yar oo biyo qaboojiye ah kuwaas oo ku samaysan qaybta sare ee troposphere-ka iyaga oo nuugaya dhibco biyo ah. Marka dhibco-biyoodyadan ay isku dhacaan, way is biirsadaan si ay u sameeyaan baraf baraf ah. Marka jajabku leeyahay culeys ka weyn iska caabbinta hawada, wuu dhacaa.
Si tan ay u dhacdo, heerkulka qaabeynta barafka waa inuu ka hooseeya eber. Nidaamka samaysigu wuxuu la mid yahay barafka ama roob dhagaxyada leh. Kaliya farqiga u dhexeeya ayaa ah heerkulka qaab-dhismeedka.
Marka barafku ku soo daato dhulka, wuu soo dhisaa oo dhisaa lakabyo. Ilaa iyo inta heerkulka deegaanku ka hooseeyo eber darajo, wuu sii jirayaa oo sii wadaayaa in la keydiyo. Haddii heerkulku kaco, jajabku wuxuu bilaabayaa inuu dhalaaliyo. Heerkulka ay samaysato barafku badanaa waa -5 ° C. Waxaa lagu abuuri karaa heerkul yar oo sarreeya, laakiin way ka badan tahay -5 ° C.
Guud ahaan, dadku waxay barafka la xiriiraan qabow daran, marka runta ay tahay in inta badan barafka da'o uu dhaco marka dhulku leeyahay heer kul 9 ° C ama ka badan. Tani waa sababta oo ah qodob aad muhiim u ah lama tixgelinayo: huurka deegaanka. Qoyaanku waa qodobka qaboojinta jiritaanka barafka meel. Haddii cimiladu aad u qalalan tahay, ma dhacayo baraf xitaa haddii heerkulku aad u hooseeyo. Tusaale ahaan tan waa Dooxooyinka Qalalan ee Antarctica, halkaas oo ay ku taal baraf, laakiin aan weligood baraf ahayn.
Waxaa jira waqtiyo uu barafku qallalo. Waxay ku saabsan tahay xilliyadaas oo jajabyada, ee lagu sameeyay qoyaanka deegaanka, ay dhex marayaan hawo qalalan oo u rogeysa nooc budo ah oo aan meelna ku dhegeynin taasna waa ku habboon tahay cayaaraha barafkaas.
Barafka soo ururay ka dib marka uu da'o barafku wuxuu leeyahay dhinacyo kala duwan iyadoo kuxiran sida falalka hawadu u kobcaan. Haddii ay jiraan dabaylo xoog leh, baraf dhalaalaya, iwm.
Jajabku caadi ahaan waxay cabbiraan wax ka badan hal sentimitir, in kasta oo cabbirka iyo isku-dhafka ay ku xiran yihiin nooca barafka iyo heerkulka hawada.
Kiristaalo baraf ah ayaa ku yimaada qaabab aan tiro lahayn: prisms, taarikada laba-geesoodka ah ama xiddigaha caanka ah. Tani waxay ka dhigaysaa baraf kasta oo u gaar ah, in kasta oo ay dhammaantood leeyihiin lix dhinac. Heerkulka ayaa hooseeya, sida ugu fudud ee barafka barafka iyo cabirka yar.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo baraf ah waxayna kuxirantahay qaabka uu u da'o ama u kaco iyo qaabka loo kaydiyo.
Waa nooc ka mid ah barafka in foomamka si toos ah dhulka. Marka heerkulku ka hooseeyo eber oo ay jirto huur badan, biyaha dhulka dushiisa ayaa baraf noqda oo dhaliya dhaxan. Biyahaani waxay inta badan ku ururaan wajiyada ay dabayshu ka kacdo waxayna awood u leedahay inay biyaha u qaaddo dhirta iyo dhagxaanta ku jirta dhulka dushiisa.
Balaayado waaweyn, baalal baalal ah ama is-weydaarsi adag ayaa samaysan kara.
Qabow baraf ah
Farqiga u dhexeeya dhaxankan iyo kii hore ayaa ah barafkan waxay soo saartaa qaabab kristaliin qeexan sida seefaha seefaha lagu duubo, duubabyada iyo chalices. Nidaamkeeda qaab-dhismeedku wuu ka duwan yahay dhaxanta caadiga ah. Waxaa lagu sameeyaa habka sublimation.
Barafka budada ah
Barafka noocan ah ayaa ah kan ugu caansan ee loo yaqaan noqo mid jilicsan oo khafiifa. Waa midda lumisay isku-xirnaanta sababo la xiriira kala duwanaanshaha heerkulka u dhexeeya darafyadiisa iyo xarumaha dhalada. Barafkani wuxuu u oggolaanayaa duulasho wanaagsan barafka.
Barafkan waxaa sameeya wareegga joogtada ah ee dhalaalida iyo dib u qaboojinta ee ay ku dhacaan meelaha heerkulkoodu hooseeyo laakiin ay qorraxdu jirto. Barafku wuxuu leeyahay kristantarro qaro weyn oo wareegsan.
Barafkan ayaa ah ku badan guga. Waxay leedahay lakabyo jilicsan oo qoyan oo aan lahayn iska caabin badan. Waxay sababi kartaa baraf qoyan ama baraf saxan. Badanaa waxaa laga helaa meelaha roobabku ka hooseeyaan.
Baraf qolof leh
Noocaan ayaa la sameeyaa marka biyaha dhalaalaya dusha ay soo dhalaalaan oo ay sameystaan ​​lakab adag. Shuruudaha keena abuuritaanka barafkan ayaa ah hawo diirran, uumiga oo biyo ah, dhacdooyinka qorraxda iyo roobka.
Caadi ahaan lakabka sameeyaa wuu khafiifsan yahay oo wuu jabayaa marka barafka ama kabaha la dul maro. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xaalado ay ku jiraan lakab qaro, qolof leh marka uu roob da'o oo biyuhu dhex galaan barafka oo ay baraf noqdaan. Qolofkani aad ayuu uga khatar badan yahay sababta ay u sibiibix tahay. Barafka noocan ah ayaa aad ugu badan meelaha iyo xilliyada roobka.
Dabayluhu waxay siinayaan saameyn gabow, jabitaan, isku soo koobid iyo xoojinta dhammaan lakabyada dusha sare ee barafka Isku-darka ayaa si fiican u shaqeeya marka dabayshu keento kuleyl badan. In kasta oo kuleylka ay keensato dabayshu aanu ku filnayn inuu dhalaaliyo barafka, waxay awood u leedahay inay ku sii adkayso isbadal. Taarikada dabaysha ee la sameeyay waa la jabin karaa haddii lakabyada hoose ay daciif yihiin. Tani waa marka ay daadadku dhacaan.
Magacan waxaa loo bixiyaa lakabka khafiifka ah ee barafka hufan ee laga helo dhul baraf badan. Barafkani wuxuu soo saaraa milicsiga marka qorraxdu iftiimiso. Lakabkani wuxuu samaysmaa marka qorraxdu dhalaasho barafka dusha ka dibna mar labaad adkeeya. Lakabkaan dhuuban ee barafka ayaa abuura aqalka dhirta lagu koriyo oo yar taasi waxay ku keentaa lakabyada hoose inay dhalaasho.
Waa lakab khafiif ah oo baraf hufan ah oo la soo saaro markii biyuhu ku qaboojiyaan dhagaxa dushiisa. Barafka sameeyaa aad buu u sibiibixaa wuxuuna ka dhigaa fuulitaanka mid aad u khatar badan.
Waa godad la sameeyay sababo la xiriira dhalaalida barafka meelaha qaarkood waxayna gaari karaan moolka qoto dheer ee isbeddelaya. Cidhifka god kasta, molikuyuullada biyuhu way uumi baxaan oo bartanka daloolka ayay biyuhu ku xaniban yihiin. Kani wuxuu sameysmaa lakab dareere ah, oo markaa, sababa baraf badan oo dhalaala.
Qaab-dhismeedyadani waxay dhacayaan marka fiyuusyada fiyuusku aad u weynaadaan. Toobad keenayaashu waa tiirarka laga sameeyay isgoyska godad dhowr ah. Tiirar ayaa la sameeyaa kuwaas oo qaata muuqaalka toobadda. Waxay ku dhacaan aagag waaweyn oo leh joog sare iyo latitude hooseeya. Toobad keenayaashu waxay gaaraan horumar ballaaran oo ka dhaca Andes iyo Himalayas, halkaas oo ay ka cabbiri karaan wax ka badan mitir, taas oo socodka ka dhigaysa mid adag. Tiirarku waxay u janjeeraan dhanka qorraxda.
Waxaa la sameeyaa marka xilliga dhalaalku bilaabmo. Shabakadaha bullaacadaha waxaa sameeya biyo daadad. Qulqulka dhabta ah ee biyaha kuma soo baxo dusha sare, laakiin bustaha dhexdiisa. Biyuhu waxay ku siibanaayaan gudaha barafka waxayna ku dhammaanayaan shabakadaha bullaacadaha.
Kanaallada bullaacadaha waxay sababi karaan qulqulo qulqulaya oo dhib ku noqonkaraan barafka.
Xuduudaha waxaa lagu sameeyaa ficilka dabaysha ee dusha barafka. Barafka qallalan wuxuu ku yimaadaa qaabab nabaad guur leh mowjado yaryar iyo khaladaad la'aan.
Waxay yihiin baraf ku soo ururay cirifyada oo khatar gaar ah leh, maaddaama ay sudhan yihiin sameysma tiro aan degganeyn oo ka go'i kara dadka dhexdooda ama sababo dabiici ah (dabayl xoog leh, tusaale ahaan). Waxay awood u leedahay inay samayso qulqulo qulqulatooyin wata, in kasta oo halisteeda ay jirto iyadoo kaligeed ay dhacayso.
Macluumaadkan waxaad si hubaal ah u awoodi doontaa inaad ku ogaato barafka si aad u badan oo aad u aqoonsan karto nooca barafka jira xilligaas marka xigta ee aad aado meel baraf leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato barafka
Barnaamijyada digniinta roobka ugufiican